सारुकसँग सुहायो साम्राज्ञीको जोडी ! - Sagarmatha TV
सारुकसँग सुहायो साम्राज्ञीको जोडी !
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा चलचित्र प्रदर्शनमा आएपछि मात्र हुने गरेको छैन, प्रचार प्रसारमा पनि उत्तिकै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । निर्माण पक्ष को भन्दा को कमको स्थितिमा आफ्नो चलचित्रको प्रसारमा जुट्छन् । चलचित्रको प्रदर्शनको मुखमा उनीहरुलाई खानेपिने सम्मको फुर्सद पनि हुँदैन । हालै चलचित्र ‘इन्टुमिन्टु लण्डनमा’ टोलीलाई पनि यस्तै व्यस्तता बढेको छ ।
असोज ५ गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको रेनाशा वान्तवा राई निर्देशित प्रतिक्षीत फिल्म ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ टोली यतिबेला चलचित्रको तीव्र प्रचारमा जुटेको छ । चलचित्रका केही गीत र ट्रेलरले गीत सार्वजनिक भइरहेको बेला निर्माण युनिटले पुनः अर्को गीत सार्वजनिक गरेको हो । हालै काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच ‘जुरायो जुरायो…’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो । गीतको शब्द तथा संगीत अहिलेको चर्चित संगीतकार बसन्त सापकोटाको हो । राजेश पायल राई र मेलिना रार्ईको स्वर रहेको गीतमा फिल्मका दुई लिड कलाकार साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र सारुक ताम्राकारलाई प्रमुख स्थान दिइएको छ । सार्वजनिक गीतको भिडियोमा मेकिङ क्वालिटी उच्च देखिएको छ ।
साम्राज्ञी र सारुकको इन्गेजमेन्ट हुनुअघिको रमझमलाई भिडियोमा उतारिएको छ । गीतमा सेटअपदेखि कलाकारको पहिरनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । यो फिल्ममा डेब्यु ब्वाई धिरज मगरको पनि प्रमुख भूमिका छ । ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ लाई प्रज्वल समशेर जबरा र प्रभु समशेर जबराले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा मिरा अर्थात् मिन्टुको भूमिकामा साम्राज्ञी, इशान अर्थात् इन्टुको भूमिकामा धिरज प्रस्तुत छन् । आई कोर फिल्मस्को व्यानरमा निर्मित फिल्मका सह–निर्माताहरुमा सुलेखा राई, बसन्त तामाङ र सुष्मिता जिरेल रहेका छन् । फिल्मको लेखकमा अभिमन्यु दिक्षित र रेनाशा रहेका छन् भने, आभास कर्माचार्यको संवाद रहेको छ । शैलेन्द्र धोज कार्कीको छायांकन रहेको फिल्ममा टिसूजिल कर्माचार्य, हर्कुलस बस्नेत, स्वप्न सुमन र बसन्त सापकोटाको संगीत रहेको छ ।
गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक राईले ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ ले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई गर्व गर्न लायक एक उचाइमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । फिल्मको कथा र मेकिङमा विशेष ध्यान दिएको उनले बताइन् । अभिनेत्री साम्राज्ञीले गीत र ट्रेलरबाट पाएको सकारात्मक प्रतिक्रियाले आफू उत्साहित भएको बताइन् । ‘जुरायो जुरायो’ गीतलाई पनि दर्शकले रुचाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् ।
अभिनेता द्वय धिरज र सारुकले गीत झैं फिल्म पनि सुन्दर बनेको बताए । सार्वजनिक गीतले इङेज्मेन्ट र बिवाहको माहोललाई इङ्गित गर्छ । त्यसोत यसअघि सार्वजनिक भएको ट्रेलर र गीतमा भने नायक धिरज र साम्रज्ञीलाई प्राथमिकता दिएको थियो । डेव्यु फिल्म ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’बाटै धिरज फोकसमा आएका हुन् । चलचित्रकी नायिका साम्राज्ञी पनि नेपाली चलचित्रकी निकै नै डिमाण्डेड अभिनेत्री हुन् । उनले अहिलेसम्म अभिनय गरेका सवै चलचित्रले नेपाली बक्सअफिसमा उत्कृष्ट कारोबार गरेका छन् । यही कारणले नै उनको बजारमा व्यस्तता बढेको पनि छ ।
साम्राज्ञी दर्शकको नजरमा बस्न सफल भएको भए पनि उनको प्रायः सबै चलचित्रमा उस्तै क्यारेक्टर हुने गरेको भन्ने आलोचना समेत दर्शकहरुबाट सुन्नमा आएको छ । तर, यस चलचित्रबाट भने उनी विगतका चलचित्रभन्दा केही फरक तरिकाले प्रस्तुत हुने नायिका साम्राज्ञी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्– ‘कलाकारले चलचित्रको कथाअनुसार भूमिका निभाउने हो, दर्शककले उस्तै क्यारेक्टरमा देखियो भन्नु स्वभाविक पनि हो, किनकी मैले गरेका हरेक चलचित्र लभ स्टोरी छन् । त्यसैले पनि यस्तो पर्न गएको हो ।’